Soo saaraha ugu Wanaagsan BM603-S-3-CS | Gaoji
2. dhumucdiisuna waxay Processing: busbar naxaas 16mm / Copper stick 25mm;
3. feedhka ugu badan: ∅32;
2. Cabirka ugu badan: 15 * 160mm;
3. Awoodda ugu badan ee wax soo saar: 350KN.
Qaybta feerku waxay qaadataa shaxda tiirarka, waxay qaadaysaa xoog macquul ah, waxay si wax ku ool ah u xaqiijin kartaa isticmaalka muddada-dheer iyada oo aan lahayn isbeddel. Daloolinta daloolka dhinta waxaa lagu farsameeyay mashiinka xakamaynta tirada kaas oo hubin doona saxsanaanta sare iyo nolosha dheer, iyo hawlo badan sida daloolka wareega, daloolka wareega dheer, godka laba jibbaaran, feedhka laba geesoodka ah ama dhoobada ayaa la dhammaystiri karaa iyadoo la beddelayo dhinta. Oo waliba fidin kara ama xiirin karaysa naxaas.
Qaybta xiirashada ayaa dooranaya habka kaliya ee xiirida, ha ka dhigin wax xoq ah inta ay xiirayaan alaabta.
Qeybtani waxay qaadataa qaab dhismeed isku-dhafan oo wareegsan kaasoo wax ku ool ah oo awood u leh nolol dheer.
Xiga: Ku habboon Feerka taxanaha BP-50
Lakabka I: 1500 * 1200Lakabka II: 840 * 370 1500 11.37 380 3 * 31.5 PLC + CNCmalaa'ig foorara
Qaybta feedhka Copper / Aluminium ∅32 (16 * 160mm) ∅25 (Udub Copper) 600
Qaybta xiirashada 15 * 160 (Xiirashada Kali ah) 12 * 160 (Xiirashada Feerka) 350
Qaybta laabaya 15 * 160 (Laabid toosan) 12 * 120 (Laabasho Horizontal) 350